Qatar : Mizarazara Be Ny Hevitra Mikasika Ny Fivarotana Sakafo Misy Kisoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2011 0:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, عربي, русский, Français, 日本語, English
Niely be ny vaovao tao Qatar fa azo vidiana ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny sakafo misy kisoa, na dia avy amin'ny orinasa mpaninjara toaka ” Qatar Distribution Company” irery ihany aza, ary ho an'ireo manana fanomezan-dalàna hivarotra zava-pisotro misy alikaola irery ihany.
@Marieboo713 : Tsy azoko hoe maninona ny olona no manao ho olana be ny #porkinqatar ( fahatongavan'ny kisoa ao Qatar). Raha tsy tianao ilay izy, aza mihinana…
@ThisisMK1 : #PorkInQatar (fahatongavan'ny kisoa ao Qatar) hanova inona? Raha voararan'ny fivavahanao ilay izy aza vidiana dia aza mihinana! inona no olana amin'izany! moa va tsy voarara koa ny zava-pisotro misy alikaola?
@chearn73 : #PorkInQatar ( fahatongavan'ny kisoa ao Qatar) dia hevitra tena ratsy raha mahatonga ny mponina hankahala antsika! te ho tiana aho, fa tsy ho hankahalaina.
@tharveyom : #PorkinQatar ( fahatongavan'ny kisoa ao Qatar), firenena silamo io noho izany tokony ho hajaina ny fototra ijoroany sy ny hajan'ireo olona ao!
@sewalef : Tsy azon'ny olona izany. Tsy momba ilay kisoa izany- fa momba antsika izay mahatsiaro tena ho miha vitsy hatrany-ato amin'ny firenentsika ihany. #qatar #porkinqatar
Ilay teratany avy ao Qatar Fahad AlAssiry, manaraka izany, dia nanambara fa tsy misy iraisan'ny mihitsy ny fanaraha-maso eo amin'ny kisoa sy ny zava-pisotro misy alikaola :
@FahadAlAssiry : Ilay tohan-kevitra momba ny tsy fitorohana ny alikaola dia tsy manan-kery, ny fandikana foto-kevitra iray indray mandeha dia tsy midika ho fandikana ny hafa . #porkinQatar
@FahadAlAssiry : Ny maha laro lehibe ny alikaola eo amin'ny fombafomba fiainan'ny maro amin'ireo tsy silamo no mahatonga azy ho voamarina . #porkinQatar
@KhalidAlRabban : Tsy noheveriko mihitsy hoe ho avy ny andro hanontaniako amin'ny mpandroso sakafo ao aminà hotely iray ao Qatar hoe inona karazana hena inona no ao anatin'ny ” burgers” ao amin-dry zareo #PorkInQatar
@R_AlDosari : ny fivarotana #porkinQatar (sakafo misy kisoa) dia tsy misy hidirany amin'ny maha olo-mandroso, Na ahoana na ahoana ! mihevitra aho fa mila averina adika indray ny fomba famaritana sy ny foto-kevitra fototra ato Qatar !
@R_AlDosari : Mety aminao ny #porkinQatar NEFA tsy mety amin'ny foko hafa ao Qatar ary tsy mety amin'ny zaza manan-dray tsy avy ao Qatar & tsy mety amin'ny” bdoon”!
@adriatomatic: #porkinqatar ny zavatra iray momba ilay izy dia ny vitsy an'isa no mahazo tombony amin'izany, kanefa raha naparitaka ilay izy, olona maro no hahazo tombony amin'ny fitsinjaram-panànana
@LULW_: RT @ReyRevolver: RT @tamtoom_: raha tsy mila #PorkinQatar( kisoa ao Qatar) ianao dia aza miandry ireo firenena tsy silamo hanome anao sakafo” halal” ho an'ny v******kelinareo. mpihatsaravelatsihy
@orcl8 : Aza ampitahaina ny #PorkinQatar ( kisoa ao Qatar) sy ny sakafo “halal” any Andrefana satria ny sakafo halal dia tsy manafintohina na voaràra amin'ny fivavahan'izy ireo #Qatar
@blakehounshel l: QDC dia nilaza fa tao anatin'ny adiny efatra dia nahalafo 10% tamin'ny entana nafaranany izy #porkinqatar
@AishaAlJufairi : RT @KKAlThani: #PorkInQatar? (kisoa ao Qatar) raha mbola “Halal”ilay izy, dia tsy raharahiako
@danalthani : @shamozal “Ho an'i Kisoa! Tonga ny taratasy fahazahoan-dàlanao ho ao Doha! ankehitriny ianao dia afaka ny hinamana amin'ireo akoho sy trondron-dry zareo ”#porkInQatar #BoycottQAirways
@khalifa_MK : “Majorette” manaraka 😀 #porkinQatar
@Bo5alood_12 : Voalohany aloha dia nataony manara-dalàna ny alikaola, avy eo nilaza ry zareo hoe afaka mividy #PorkinQatar (kisoa ao Qatar) ianareo ankehitriny, ary amin'ny farany ho raisin'izy ireo ho toy ny asa raikitra ny fivarotan-tena !!!!
@Reem_abdulKarim: #PorkInQatar (kisoa ao Qatar) fotoana izao hahatonga anareo ho tena Angry Birds (Vorona Tezitra be) ary hanomboka hamono ireo kisoa ratsy ireo izay mibahana ny tsenanareo. ;p
@Jaber_AlMulla: http://twb.ly/uimRXk‏ Azafady anie mba apetaho ilay sora-baventy “Ajanony ny kisoa ao Qatar” ary zarao ‎#PorkInQatar
Ny tena tsikaritra, angamba, dia ny tenifototra #BoycottQAirways, izay nahitana bitsika an-katezerana an-jatony, izay tamin'ny teny Arabo.
Qatar Distribution Company (QDC), izay mpaninjara sakafo misy kisoa sy zava-pisotro misy alikaola ho an'ny olon-tsotra ao amin'ny firenena, dia sampan-draharaha iray an'ny Qatar Airways Group. Ary izany, mazava ho azy, dia nitondra tamin'ny antso ho amin'ny hetsika iray ho fanaovana an-kivy ilay hany zotram-piaramanidina izay ao amin'ny firenena.
Misy lahatsoratra mitovy amin'ity hita ao amin'ny Doha News.